Naval Battle of Cape Kaliakra: umlando, imiphumela kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Lasolwandle Russian bekulokhu abadumile njalo ngemphumela. Uhlu ukunqoba kwakhe enkulu - Battle of Cape Kaliakra. Kwathi phakathi nempi Russian-Turkish. Lapho sikhumbula impi asolwandle eCape Kaliakra, indaba isifikisa esidlule, futhi sizithola 1791.
Ukuze uqonde ukuthi wokuvelela Kwakuwukunqoba yethu, kumelwe sibe umqondo wokuthi anamandla ukuthi isitha bangenwe umoya. Ngezinye anawo uCaptain Pasha Hussein kwaba imikhumbi 18 no-43 umkhumbi amancane okuqondene Algeria, Tripolitania, Tunisia naseConstantinople. yonke le mikhumbi lalinabashumayeli 16 imikhumbi, scorers ezimbili, frigates ezimbili nezitsha ezincane 19. Battle Headed Cape Kaliakra umkhuzi F. F.Ushakov.
Ngaphambi kokwenza stop, ibutho Turkish kwakudingeka ahambe yonkana oLwandle Olumnyama. Ngo-June, imikhumbi isitha uvele ngasogwini eCrimea eduze Balaklava. Ngaphandle kolwazi elimayelana nalokho Anapa isiRashiya, imikhumbi-Turkish waya kulolo hlangothi. Nokho, ukuqinisekisa ukuthi edolobheni imatasa, Ngibuyele emuva. Ngayo leyo nyanga, kwakukhona impi eDanube, lapho amabutho Turkish anqotshwa. Kodwa imikhumbi isitha akanayo ithemba ukunqoba. umkhumbi wabo inombolo nenqwaba yabantu esuka 800 ukuze 1,500 ngalinye. I-Turks wayethemba ukuthi bagibele umkhumbi, kunokuba wezikhali.
Izitha usufikile azungeze ugu Rumelian eduze Varna. Lokhu Ushakov kubika ukukhalipha, futhi wanquma ukuhola empini isigaba sakhe. Kunzima ukucabanga ukuthi ezimbalwa nje izinsuku ngaphambi izimoto zethu ayikwazanga ukuya olwandle. Mhlawumbe yilokhu kwephuza kwezinto eye yasiza Russian ukuba endaweni efanele ngesikhathi esifanele. Kwakuthi ngenxa yokuntuleka ukunikezela ukuntuleka ukuqeqeshwa lwemikhumbi eziningana. ulwazi mayelana lapho imikhumbi isitha nazo okwamanje utholiwe. amabutho Turkish kwakuyiphutha ukuthi akukho abebengakwenza ukuze wazi kusengaphambili ukuthi isitha ihamba esiqondisweni sabo. Ukube nje uthumele umkhumbi onogada, Battle of Cape Kaliakra akakwazanga ukuthatha indawo. Ngaphezu kwalokho, le mikhumbi isitha zikleliswe ngasogwini futhi ukuhlasela okuvela hlangothi abazange ulindele, ucabangela ukuba ngokwanele evikelwe.
Admiral Ushakov wanquma ukusebenzisa isikhashana ukumangala. Wathumela isigaba sakhe phakathi nje ebhishi imikhumbi isitha. Ngaphezu kwalokho, Russian ubephelezelwa emoyeni. Battle of Cape Kaliakra Ishmayeli kwaqala nge ukuhlaselwa ukumangala, okuyinto ebangele uvalo ngemikhumbi isitha. Phela, ngisho ezaziwayo zawo babubheka maqondana kolwandle, okusho ukuthi amatilosi ayikwazanga aziphindiselele. Umkhuzi imikhumbi-Turkish ngaphambilini imikhumbi yakhe yokwenza phezulu umugqa lwempi. Nokho, lokhu iqhinga wanikezwa kubo akulula. Ukuze phaka imikhumbi, amatilosi imikhumbi-Turkish waqala ukunqinda izindophi. Isikhathi uzama ukucosha amahange, zazingasho lokho. Ngaphandle kwalokho, kancane kabusha, imikhumbi isitha bhekana each nye, okubangela ukulimala komunye nomunye: Ukubhidliza ka oseyili, wasihlephula igiya.
Isitha ngeke adlule
imikhumbi Algeria wagijima Admiral Seyit Ali, lowo owayethembisile ukuletha Turkish Sultan "Usak Pasha." Ngaphansi kwesandla sakhe, bazama phusha imikhumbi ehamba phambili we Navy Russian. Lokhu iqhinga wabonwa Admiral Ushakov, owayeseqenjini umkhumbi ngokuthi "uKhisimusi." Kuwo, waphetha umkhumbi wase-Algeria, bamhlasela. Uhla close umkhumbi isitha alimala esindayo, wangqongqoza kokuthi kwakusinda kwehlela-topmast negceke main-topsail. Algeria ancipha, kodwa mpi yaqhubeka futhi amatilosi le "Christmas" impi nobuqhawe baqhubeka, ukudweba isitha indiza. Sea impi off Cape Kaliakra sibe amahora amathathu.
Ukunqotshwa kwe-imikhumbi-Turkish kwaba olungenamkhawulo. Nokho, umoya onamandla, wasiza isiRashiya, lapho kwakukhona impi eCape Kaliakra, ivesi, bese kulokhu basizwa ukuba izitha ukubaleka. Nokho, lapho kwathunyelwa Bosporus, element kabusha zamisa, futhi ezinye izitsha wahluleka ukubuyela lot yokupaka. Baya phansi. Imikhumbi-Turkish bahlupheka kakhulu. Kuphela Flagship umkhumbi Algeria bashonile kwathi abanye abantu abangu-450 balimala, kunesikhathi lapho yacishe yacwila. Russian futhi ngalahlekelwa umuntu engangingase abantu abangu-17 bashonile kwathi abanye 27 abalimele, umkhumbi wawusengozini cishe awekho umonakalo sisetshenziswa. Nalawo ayaziwa ukwazi ngokushesha ukukulungisa.
Yiqiniso, Ushakov uye waba nendima esemqoka kule mpi. Lungisa isinqumo sakhe ukuze ngichithe isikhathi esithe futhi sanikeza ukumangala lapho kubaluleke kangaka kuleli ngokuziphatha imisebenzi yezempi. Hhayi ngaphandle isizathu ngalokhu kunqoba yena yanikezelwa Order of St Alexander saseNevsky. iqhinga lakhe, lapho isigaba sethu kwadingeka adlule phakathi ogwini futhi imikhumbi isitha, kwakuyingozi. Nokho, Abawinile ahlulelwe. Ngaphezu kwalokho, leli qhinga wasetshenziswa Admiral Nelson phakathi nempi Russian-isiFulentshi, futhi kwaholela elikhulu ukuze siwuphumelele. ojenene Excellent - lokhu akukona konke. amatilosi Ukuqeqesha futhi kwadingeka ukubaluleka okukhulu, lapho kwakukhona impi eCape Kaliakra. Futhi baye kakhulu, okwenza ukuba athathe isinyathelo ngokushesha futhi zibonisa ukuhlaselwa isitha futhi, ekugcineni, kungasindisa ukuphila.
Ngokuthakazelisayo, lapho impi kwenzeke Cape Kaliakra, okuyinto usuku 31 Julayi, 1791, thina wasayina preconditions ngoba isiphelo sesimiso ukuthula phakathi Prince Repnin futhi Grand Vizier. Ngalolu suku, abakhileyo waseConstantinople wazizwa buyingozi. imikhumbi esonakele imibono yabo waqinisekisa amahemuhemu ukuthi Ushakov maduze uthole enhlokodolobha Turkish. Lokhu kwenza ukuba abantu ePort ukusheshisa ukusayinwa isiphelo sesimiso ukuthula. Nakuba kuze kube namuhla, kwakusadingeka ingihlupha. Lokhu kufakazelwa iqiniso lokuthi kokunqotshwa abaseTurkey aluzange luntengantenge intando yabo engizoba ngakulo.
Uma kungenjalo, kungenzeka kube khona
Babefuna ukuqinisa ibutho laso futhi lasolwandle, bamenywa ukuba ahlanganyele empini kwamanye amazwe. Ukuqinisa iviyo lalo lemikhumbi yempi, abaseTurkey wayethemba ukuthi uwine ke endaweni ulwandle. Ngakho-ke Ushakov wathola oda ukuhlasela kuphela. Jikelele G. Potemkin wabhala kuye incwadi washo ngokuqondile ngalokho elinde ukunqoba Admiral. Ushakov ayikwazanga ukwenza okuhlukile. Rodina bambuza usizo, kwakudingeka akugweme ingcindezelo abaseTurkey e oLwandle Olumnyama. Battle of Cape Kaliakra kwaba impi ewumnqamula-juqu, wathonya umphumela impi futhi waletha eduze kwakhe. Ngemva le mpi Potemkin wathi abaseTurkey baqala ukwesaba okwakugcwele eMbusweni Russian. Kungase ayisekho ngemibuzo. Battle of Cape Kaliakra, ngokusho kwakhe, waqinisekisa ukubusa ngoxhaxha Russian ogwini olusenyakatho yeBlack Sea, kuhlanganise eCrimea.
Omunye kungaba kuphela zibabaza isibindi Black Sea yethu imikhumbi ezinsukwini Admiral Ushakov. Nakuba ukuphila selukhombisile ukuthi namuhla amatilosi yethu azizona wawungaphansi ukulungela isibindi oyise owayehlala futhi wabalwela Russia ekhulwini XVIII.
Indaba ukuthi amaGreki asendulo ngokuthi emfuleni Borisfen
Indodakazi likaZeus, noma abasha futhi lady elihle Olympus
Art Okuhle Ancient Egypt
Ibhodlela lewayini. Umlando wamandla kanye nezici zamafomu awo
Indlela ugeza microwave oven ngosizo izimali
Buka Kufakiwe 0 Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Temple of the Erechtheon in Athens: History, myth and facts
Kungani crack amakhona izindebe?
Mayelana 'Android "ukushintsha ifonti? 4 izindlela
Imibono Simple: indlela yokwenza icala ipensela
Ukuqaqa iwindi: mlando. Indlela esikhundleni amawindi obudala entsha?